Ma dhabbaa in Muuska laga qaado caafimaad-darro?! | HimiloNetwork
Ma dhabbaa in Muuska laga qaado caafimaad-darro?!
Posted by: Zakariya in Faallooyinka August 1, 2017	0 331 Views
Muqdisho (Himilonews) – Muuska ‘Banana’ waa mid ka mid ah dalaga ugu muhiimsan qudaarta, waxa uu kaalin lixaad leh kaga jiraa dhaqaalaha dhowr dal oo kamid ah dunida, tiiyoo ugu wacan tahay qiimaha sare ee uu kaga jiro cunnada, xawliga isticmaalkiisa iyo dhadhanka uu ku laran yahay macaanka uuna kaga gedisan yahay qudaarta kale.
Waa dhame sanadka xilliyadiisa kala duwan laga helo suuqyada caalamka, taas oo ay sii dheer tahay inuu ka mid yahay miraha ku wanaagsan daabulidda iyo keydinta.
Tilmaam ahaan, uma baxo geed ahaan sida ay dad badani moodaan, taa badelkeeda waxa uu ka tirsan yahay dhirta nuuca ramaaska loo yaqaan.
Tarantiisu waxa ay ku habboon tahay dhulka leh carrasan bacriminta ku wanaagsan, jeer Soomaaliya ay hoggaamineyso dalalka uu aadka uga baxo, waxaana liiska hore inagula jira dalal carbeed sida Mauritania iyo Sudan.
Gobollada uu caanka ku yahay dalkeenna waa gobalka Sh/Hoose degmadiisa Afgooye; gobalka J/Hoose magaaladiisa Jamaame; iyo Jilib oo iyana ka mid ah degmooyinka gobalka J/Dhexe. Waana iska caadi sidoo kale inuu ka baxo gobollada ay webiyadu maraan.
Soomaalida qaar waxa ka dhaadhacday fikradda ah in muusku halis ku yahay caafimaadka islamarkaana laga qaado gooryaan ‘worm’. Balse sheekadaas lama hayo asalkeeda halka ay uga timid Soomaalida walow dadka qaar ay sheegaan in gumeystihii oo doonaya baabi’inta jaceylkii muuska loo qabay uu fidiyay. Waxaana taas xoojin kara sida gumeystihii heystay koofurta ee Talyaanigu u jeclaa muuska ugana ganacsan jiray isaga oo u yaqiin ‘Banana Jaalle’.
Qarnigii dhamaaday dabayaaqadiisa, waxa iyana jirtay been abuur baahay oo uu fidiyay majaajilistaha caanka ah ee reer Britain “Karl Pilkington”. Waxa uuna sheegay muuska in halis caafimaad uu leeyahay, qatar dhimasho ahna aad galayso haddii aad lix xabo ka cunto.
Balse fikradaas waxa cagta mariyay khubarada xagga cuntada sida Catherine Collins, oo ka tirsan Isbitaalka St George ee London, oo dabool qaaday in muuska ay ku badan tahay macdanta Potassium, oo jirka bini’aadamka u baahan yahay islamarkaana wax badan ka tarta wada-shaqaynta qeybaha kala duwan ee jirka. Sidoo kalene waxa laga helaa carbohydrate iyo aashitooyin jirka faa’iido u leh.
Si kale haddii aan u dhigno, lama yareysan karo faa’iidooyinka caafimaad ee uu muuska leeyahay, waxaana tusaale u ah sida uu dawo ugu yahay xanuunnada asiiba dheef-shiidka iyo kahor-tagga cudurro uu ka mid yahay Kansarka ‘Cancer’ tiiyoo sii dheer tahay inuu la dagaalamo gabawga.
Awood siinta jirka, ka hortagga Calool-fadhiga, xoojinta habka difaaca jirka, isku dheelli-tirka miisaanka, iyo dhowridda bad-qabka wadnaha iyana waa faa’iidooyin kale oo lama dhaafaan u ah qofka joogteysta ama badsada cunista muuska. Ka dheregsanaanta fahamka faa’iidooyinkiisana, waxa ay dunida qaar beri ka dhigtay in dadka la qadariyo sida Faylosuufiinta ‘Philosophers’ loo gaar yeelo. Balse dunida maanta ayaad moodaa iney wada fahmeen oo uu ka mid yahay cunnooyinka mideeya sabool iyo hodan.
Dawladaha ku horreeya dhoofintiisa dunidan casriga ah waxa hor boodaya India, China, Filipina iyo Brazil, halka ay liiska tobanka dawladood ee ugu horreysa kula jiraan Ecuador, Indonesia, Tanzania iyo Costa Rica. Waxaana ka dhicin oo afjarka tirada noqday dalalka Thailand iyo Mexico.
Hubaal Somalia ineysan ka maqnaateen liiska murqa-weynta dhoofisa muuska haddii uusan qaran-jab ku dhicin, shirkaddii dhoofinta muuska ee Somali Fruit-na ay sii laballaabi laheyd u dhoofintiisa dalalka Carabta iyo Yurub. Hase ahaatee, marnaanta siyaasadeed ee uu dalku galay ayaa inoo diiday hankaas, inkasta oo 22 sano kadib burburkii dalka oo ku asteysan 2012 laga hir-geliyay wadanka shirkad madax bannaan oo dhoofisa muuska laguna magacaabo Fruit Som. Waxaana sees dhigga shirkadda lug ku lahaa beeraleyda gobalka Shabeellada Hoose.
Tanina waxa ay dhiirri-gelin iyo ku dhiirrasho u noqon kartaa shacabkeenna oo sida dalalka loo iib-geeyo u daneynayaan kala dhex bixi kara heerka ay la’eg tahay faa’iidada iyo caafimaadka uu sito, kuna iloobi kara aragtida qaldan ee oranaysa muuska waxa laga qaadaa caafimaad darro.
W/D: Isma’il Mohamed Samatar.
Ilaha: http://himilonetwork.com://mawdoo3.com, http://himilonetwork.coms://www.webteb.com/articles.
Maqaalkan waxaa markiisii ugu horreeyey lagu qoray barta internet-ka ee radiohimilo.so.
Previous: Laacib Muslim ah oo kooxdiisa kaga tagaya astaanteeda Macatabka
Next: Dhaqtar sida dib-jirta u labista si uu bilaash ugu dabiibo darbi-jiifta ku nool Maraykanka!
Saameynta ay dhalinyarada ku yeelatay daawashada kubadda cagta
Masjidka Quba oo qaadi doona 55,000 haddii la ballaariyo.
Masaajidda Adeegsada Cadceedda laga dhaliyo Korontada oo ku badanaya Hindiya.
Wixii aan kusoo arkay Xajka iyo Waaya’aragnimadayda!